တူဂျဂူများ - ဝီကီပီးဒီးယား
တူဂျ လီနာ ဂူများ
Tulja Lena caves (तुळजा लेणी)
19°12′30″N 73°50′08″E﻿ / ﻿19.2083°N 73.8356°E﻿ / 19.2083; 73.8356ကိုဩဒိနိတ်: 19°12′30″N 73°50′08″E﻿ / ﻿19.2083°N 73.8356°E﻿ / 19.2083; 73.8356
တူဂျဂူများ (Tulja Lena तुळजा लेणी) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂျန်နာမြို့ အနောက်ဘက် ၄ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ Shivneri တောင်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည့် ဂူများဖြစ်သည်။ ဂျန်နာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်လည်ရှိ အခြားဂူများမှာ မန်မိုဒီဂူများ၊ ရှစ်နီရိဂူများနှင့် လန်းယဒရီဂူများ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဂူများသည် စက်ဝိုင်းပုံစံ စေတီတော်များကိန်းအောင်းရာခန်းမ ပုံစံဖြစ်ပြီး ထောင့်ရှစ်ထောင့်ပါသည့် တိုင်များက စေတီကို ဝန်းရံကာ ပတ်လည်တွင် တည်ရှိသည်။ ဤဂူများသည် ဂျန်နာမြို့ရှိ အစောဆုံးသော ဂူများထဲမှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဘီစီ ၅၀ ခန့်က ထွင်းခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဂူအုပ်စုတွင် ဂူ ၁၁ ခု ပါဝင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဂူအမှတ် ၄ သည် ဟိန္ဒူဘာသာဂူအဖြစ် ရှိပြီး Tulja Devi နတ်ဘုရား၏ ကျောင်းတော်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထားသည်။ 
တူဂျဂူများသည် ဂျန်နာမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၁ မိုင်ခွဲ (သို့) ၂ မိုင်အကွာရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာသည် Sivaneri တောင်ကုန်း၏ မြောက်ဘက်ဆုံးနားတွင် တည်ရှိသည်။ ဤကျောက်တောင်များ၏ အမည်မှာ ကျောက်ဂူများထဲမှ တစ်ခုသည် ဗြဟ္မာတစ်ဦးဖြစ်သည့် တူဂျဒေဝီ၏ နတ်နန်းပါဝင်သဖြင့် ပေးထားသည်။
Remains of the circular Chaitya.
Next to these are two more plain fronts, and then two with Chaitya-window heads over where the doors have been, and smaller ones between, and the "rail ornament" and quadrantal carved roll supported by slender brackets in entire relief, as at the Bhaja Caves.
Tulja Lena Chaitya window decorations.
Tulja Lena Chaitya, plan and elevation.
Tulja Caves detailed carvings
A frieze at Tulja Lena.
↑ ၁.၀ ၁.၁ Ahir၊ D. C. (2003)။ Buddhist sites and shrines in India : history, art, and architecture (1. ed.)။ Delhi: Sri Satguru Publ.။ p. 192။ ISBN 8170307740။
↑ Dalal၊ Roshen (2010)။ The religions of India :aconcise guide to nine major faiths (Rev. ed.)။ New Delhi: Penguin Books။ p. 177။ ISBN 978-0143415176။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Fergusson၊ James; Burgess၊ James (1880)။ The cave temples of India။ London : Allen။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တူဂျဂူများ&oldid=665318" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၉:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။